အသေးစားစီးပွားရေးလူမှုရေး cheat စာရွက် Martech Zone
အသေးစားစီးပွားရေးလူမှုရေး cheat စာရွက်
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 24, 2012 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါမှာငါ၏အ peeps ကိုချစ် ကော်လံငါး, ဒါပေမယ့်ငါသူတို့အနည်းငယ် Diggation ၏စောင့်ကြည့်ပြန်လည်ပြန်လည်တင်ရန်ခဲ့ကြပေမည်ထင်ပါတယ်။ Digg? တကယ်လား စိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခုစီအားဖြင့်၊ diggသင်္ချိုင်းတွင်း၌ Dugg နှင့် StumbleUpon ပန်းများစိုက်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ သိပ်မကွာဘူးလား စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ပရိသတ် ... ပရိသတ်ထွက်သွားတဲ့အခါလူမှုရေးအက်ပလီကေးရှင်းသေသွားသည်။ င်း လူမှုမီဒီယာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်.
ဒါပေမယ့်တကယ်ပဲစောင့်ပါ။ ဂူဂဲလ်စီးပွားရေးလား မင်းငါ့ကိုနောက်နေတာလား? ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကဘီယာထက်အနည်းငယ်ပိုမိုအားကောင်းတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ကောင်းပြီ၊ Flowtown အတွက်စီမံချက်မန်နေဂျာကိုလုံလောက်သောရယ်စရာဖြစ်စေခဲ့သည်။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြပါစို့။ ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာလိမ်လည်ခြင်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များအတွက်လူမှုရေးအလယ်အလတ်အဆင့်တစ်ခုချင်းစီကိုမည်သို့အကောင်းဆုံးအကျိုးရှိရှိဆုံးဖြတ်ရမည်ကိုအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုပေးသည်။ တကယ်လို့မင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသေးသေးလေးဆိုရင် LinkedIn, StumbleUpon နဲ့ Google Places တို့ကိုမမေ့ပါနှင့်။
Tags: စာရွက်စာရွက်စစ်ဆေးမှုများစာရင်းDiggFacebook ကlinkedinလူမှုမီဒီယာTumblrတွစ်တာ
WordPress တွင်စာရေးသူနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှု link ကိုဖွင့်ပါ
မတ်လ 21, 2013 မှာ 12: 39 pm တွင်
ငါ LinkedIn ပျက်ကွက်အပေါ်လုံးဝသဘောတူ ... ထင်ရှားတဲ့အဆိုပါ Instagram ကိုနှင့် Pinterest ပျက်ကွက်ဖြစ်ကြသည်နီးပါး။ သူတို့ဟာတကယ့်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုဖြစ်တယ်။
4:2016 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 03